Fetin’ny fahaleovantena : Fotoam-pivavahana sy rindran-kira ara-pilazantsara ho an’ny firenena -
AccueilSongandinaFetin’ny fahaleovantena : Fotoam-pivavahana sy rindran-kira ara-pilazantsara ho an’ny firenena
Fetin’ny fahaleovantena : Fotoam-pivavahana sy rindran-kira ara-pilazantsara ho an’ny firenena
12/06/2018 admintriatra Songandina 0
Manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena, sy ho fiatrehana ny fetin’ny fahaleovantena, dia hisy ny fotoam-pivavahana sy rindran-kira ara-pilazantsara ho an’ny firenena karakarain’ny komity amin’ny fankalazana ny 26 jona. Ny sabotsy 16 jona izao amin’ny 10 ora maraina no fanatanterahana ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana eny amin’ny fiangonana Advantista eny Soamanandrariny, iarahana amin’ireo mpino Kristianina. Ny tolakandron’ny 17 jona kosa dia hisy ny rindrankira ara-pilazantsara hiarahana amin’ireo mpanakanto sangany toa an-dry Joseph d’Af, Antsa an’i Kristy, Antokom-pihira Lova… etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Fampisehoana maimaim-poana entiny hiderana an’Andriamanitra sy hitondra am-bavaka ny firenena. Ny zoma 22 jona kosa dia hifantoka amin’ny fotoam-pivavahana hiarahana amin’ireo mpino silamo ny fankalazana, ka etsy amin’ny Mosquée 67ha no hanatanterahana izany. Hamaranana izany fotoam-pivavahana karakarain’ny FFKM Foibe kosa ny fiaraha-mivavaka etsy amin’ny Fiangonana anglikana Santa Laurent Ambohimanoro ny 24 jona amin’ny 3 ora tolakandro. « Niniana natao ireo fandaharam-potoana ireo, satria fantantsika ny fotoana handalovan’ny firenena ankehitriny, ary hametrahana ny firenena eo am-pelatanan’Andriamanitra Nahary, ary hanasa antsika rehetra fa ilaintsika izany », araka ny fanamarihana nentin’ny Révérend Jériah Rakotoson avy amin’ny komity mpikarakara.
FFKM : Mpanao politika miafina endrika
Madagasikara – Swaziland : Hihamafy ny fifandraisan’ny firenena roa tonta